Hyundai Porter II 2004 (#729280) ကို Kamaryut ၿမိဳ့နယ္တြင... | CarsDB
Lot Number: #729280
Hyundai Porter II (Box Truck)
"ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အလွန်အသုံး၀င်သည့် ဘက်စုံသုံးလို့ရတဲ့
"ရန်ကုန်လိုင်စင် လူအမည်ပေါက် နံပါတ်အနက်ကားလေး ဖြစ်တဲ့အတွက်
ကားပေါ်မှာ ဈေးရောင်းချချင်သူများအတွက် အထူးသင့်တော်သည့်ကားလေး
အသီးအနှံ ရောင်းမလား ?
ထမင်းဟင်း / မုန့်မျိုးစုံ ရောင်းမလား ?
လူသုံးကုန် ပစ္စည်းရောင်းမလား ?
စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ရောင်းမလား ?
ခု၀ယ် ခုတန်းခိုင်းလို့ရတဲ့ ကားကောင်း ကောင်းသန့်လေးပါ။
Delivery ပစ္စည်းများပို့ဖို့အတွက် လုံလုံခြုံခြုံ နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးလို့ရတဲ့ ကားလေးပါနော်..."
ရောင်းဈေး	-	145	သိန်း
KMFZCS7HP4U- , 2004Model, 2476CC, 1Ton,
10 Feet , D4BH Engine, WhiteColor,
Car No. -	YGN(7I - **** ) အနက်
အခွန်နဲနဲလေးဆောင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်နာမည်ပေါက် လုပ်လို့ရပြီနော်….
"တခြားကားသန့်သန့်လေးတွေကို လေ့လာနိုင်ရန် HGI ၏ Facebook Page (https://www.facebook.com/highgradeimage/)လေးကို
Like လုပ်ထားလိုက်ပါနော်။ သူငယ်ချင်းနှင့် မိတ်ဆွေတွေကို နှုတ်လေးနဲ့ကူညီနိုင်ဖို့
Like & Share လေးလုပ်ပေးပါလို့ ......."
"ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျးမြားတှငျ အလှနျအသုံး၀ငျသည့ျ ဘကျစုံသုံးလို့ရတဲ့
"ရနျကုနျလိုငျစငျ လူအမညျပေါကျ နံပါတျအနကျကားလေး ဖွဈတဲ့အတှကျ
ကားပေါျမှာ ဈေးရောငျးခခြငြျသူမြားအတှကျ အထူးသင့ျတောျသည့ျကားလေး
အသီးအနှံ ရောငျးမလား ?
ထမငျးဟငျး / မုန့ျမြိုးစုံ ရောငျးမလား ?
လူသုံးကုနျ ပစ်စညျးရောငျးမလား ?
စားသောကျကုနျ ပစ်စညျးအမြိုးမြိုး ရောငျးမလား ?
ခု၀ယျ ခုတနျးခိုငျးလို့ရတဲ့ ကားကောငျး ကောငျးသန့ျလေးပါ။
Delivery ပစ်စညျးမြားပို့ဖို့အတှကျ လုံလုံခွုံခွုံ နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးလို့ရတဲ့ ကားလေးပါနောျ..."
ရောငျးဈေး	-	145	သိနျး
Car No. -	YGN(7I - **** ) အနကျ
အခှနျနဲနဲလေးဆောငျပွီး ကိုယျပိုငျနာမညျပေါကျ လုပျလို့ရပွီနောျ….
"တခွားကားသန့ျသန့ျလေးတှကေို လေ့လာနိုငျရနျ HGI ၏ Facebook Page
Like လုပျထားလိုကျပါနောျ။ သူငယျခငြျးနှင့ျ မိတျဆှတှေကေို နှုတျလေးနဲ့ကူညီနိုငျဖို့
Like & Share လေးလုပျပေးပါလို့ ......."
ဆကျသှယျရနျဖုနျး	-	၀၉ ၅၁၉၇၄၇၂
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) High Grade Image Co, Ltd မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Hyundai Porter II 2004 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။